Sheekada Filimka Secret Superstar: Waa mid ka mid ah aflaanta ugu wanaagsan 2017 | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada Filimka Secret Superstar: Waa mid ka mid ah aflaanta ugu wanaagsan 2017
Sheekada Filimka Secret Superstar: Waa mid ka mid ah aflaanta ugu wanaagsan 2017
Taariikhda: October 17, 2017
Filimka Secret Superstar ee Mr. Perfectionist Aamir Khan soo saare ka yahay sidoo kalena door caawiye ku leeyahay waxaa si rasmi ah tiyaatarada loo saari doonaa maalinta Khamiis ah 19-ka October 2017.
Balse shaqsiyaadka aflaanta ka faaloodaan iyo jilaayaasha caanka ah ayaa lagu casuumay daawashada filimka Secret Superstar waxaana durba bilaabaty soo bandhiga iyo falanqeynta sheekada filimkaan oo amaan lixaad leh lagala dul dhacaayo.
Sidaa darteed filim falanqeeyaha caanka ah Taran Adarsh sidoo kalena arimaha Boxoffice-ka wax ka qoro ayaa daawaday filimka Secret Superstar sidoo kalena sheekadiisa soo bandhigay qaabka loo dhigay iyo falanqeyn dheeraad ah:
Secret Superstar waxaa Director ka ah Advait Chandan oo shaqada filim sameynta ku cusub balse wuxuu doortay fariin xiiso badan, waxaana indha lagu wada hayaa xeeladiisa filim sameynta heerka ay la ekaan karto.
Inta badan Aamir Khan filim uu soo saare ka yaay waa mid qaas ah madaama fariin qiiro badan oo maangal ah lagu soo bandhigo waana hubaal in Secret Superstar ka mid noqon doonto aflaanta Aamir lacagtiisa u quuray kuwooda ugu tayada wanaagsan.
Fariinta Filimka Secret Superstar: Filimkaan wuxuu ka hadlaa gabbar yar oo heesaa ah taasi oo hamigeeda yahay inay riyadeeda heer sare ka gaarto iyo caqabadaha dhibka badan oo ay la kulmeyso iyo qaabka ay kaga gudbeyso.
Insia [Zaira Wasim] waa gabbar iskuul dhigato sidoo kalena degan xaafada Vadodara, waxay leedahay cod aad u macaan waxayna ku riyootaa inay noqoto heesaa caan ah.
Insia [Zaira Wasim] hooyadeed Najma [Meher Vij] wey ku taageertaa riyadeeda balse aabaheed Farookh [Raj Arjun] gabi ahaanba wuu kasoo horjeedaa riyada gabadhiisa waana aabo xagjir ah oo aan rabin in dhaqanka asalka ah laga tago.
Aabo Farookh [Raj Arjun] wuxuu isku dayaa ama sameynaa wax walbo oo uu gabadhiisa kaga hor istaago inay heesaa ku noqoto xitaa wuxuu ka bur burinaa kitaarka (guitar) iyo agab walbo oo ay adeegsato.
Laakiin Insia [Zaira Wasim] sidaas kuma niyad jabeyso waxayna Internet-ka soo galinee Video ayadoo indha shareer ama naqaa u xiran oo kaliya indhaha u furan yihiin sidoo kalena heeseyso.
Gabadha aan la aqoonsan karin Video-yada ay Internet-ka soo dhigto ayadoo heeseyso ayaa kuwo caan ah oo hirgalaan noqonayaan waxayna la wareegeysaa hadal heynta baraha bulshada iyo Internet-ka sida Youtube-ka.
Filimka oo meel xiiso ah maraayo mudo hal saacna socdo waxaa soo galaayo xiiso dheeraad ahna u yeelayo Shakti Kumar [Aamir Khan] waa muusigiiste xariif ah, hablaha la hasaawo sidoo kalena aan masuuliyad badan isi saarin laakiin qalb furan dadkana jecel inuu garab siiyo inkastoo uu Superstar weyn yahay.
Insia [Zaira Wasim] waxay la kulmeysaa muusigiiste iyo abwaan Shakti Kumar [Aamir Khan] kadib labadaan saaxiibo ayay noqonayaan wuxuuna Shaki go’aan ku gaaraa inuu dhiiri galiyo Insia sidoo kalena awoodeeda banaanka soo dhigo.
Hadaba Insia [Zaira Wasim] ayadoo heesato garabkii ay waligeed u baahneyd halka ay hiigsaneyso ma gaari doontaa? Sidoo kalena aabaheed qaabkee ku qancin kartaa inay riyadeeda ku rumeyso madaama uu marwalbo ka hortaagan yahay arimaha fanka?
Qaabka Fariinta Filimka Secret Superstar Loo Dhigay: Director Advait Chandan waxaaba loo maleeyaa ruug cadaa fanka mudo dheer kusoo jiray qaabka uu sheekada Secret Superstar usoo diyaariyay malahan meel laga dhaliilo mashruucaan.
2-saac iyo 30-daqiiqo uu filimkaan soconaayo si sahlan ayaa sheekada loo dhigay laakiin dareen qiiro badan, shactiro iyo farxad isku dheeli tiran ayaa ka dhigan in marna indhahaaga ilin ka keenayo filimkaan marna kaa qoslinaayo.
Waxaa siweyn kuu soo jiidanayo 25-ka daqiiqo ee filimkaan ugu dambeeyo qiiro ahaan iyo qaabka loo jilay sidoo kalena sheekada loo dhigay waxaa lagu tilmaami karaa filimkaan mid ka mid ah aflaanta ugu wanaagsan Bollywood-ka sameeyeen 2017.
Xiriirka gabbar iyo hooyadeed ka dhaxeeyo, aabo cadaadis badan, muusigiiste fahan badan iyo saaxiib dhibka kula qeebsanayo ayuu ku saleesan yahay Secret Superstar waana arimaha filimkaan ka dhigay mid 100% sheeko ahaan dheeli tiran.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkaan: Zaira Wasim waa awooda cusub ee Bollywood-ka waxaa qasab ah in abaal marin walbo iyada la siiyo sanadkaan madaama Secret Superstar ay kusoo bandhigtay qaab jiliin saameyn lixaad leh qof walbo oo daawadana gabadhaan amaan weyn kala dul dhacaayo.
Zaira Wasim Dangal dadka ayay isku bartay laakiin Secret Superstar waxay ku noqotay awood jirto oo aqoonsi deg deg ah Bollywood-ka ka dhex heshay.
Aamir Khan waa waaya arag xariif ah wuxuu Zaira Wasim siiyay fursad ay isku muujiso mana uusan ku hareenin awoodiisa madaama uu soo galaayo shaashada hal saac marka uu filimka socdo sidoo kalena nusaac ilaa 45-daqiiqo ayuu muuqaal ahaan ku leeyahay.
Aamir Khan hal daqiiqo ayaa ku filan inuu qalbiga kaaga xado sidaa darteed Secret Superstar doorkiisa waa mid furo u ah filimkaan in daawadayaasha ay jeclaadaan waayo safarka Zaira Wasim isaga ayaa marwalbo ku caawinayo.
Cajiib danaa Meher Vij oo hooyada filimkaan ku jileyso door adag oo qiiro badan ayaa la siiyay waana mid ka mid ah jilaayaasha filimkaan ku jecleesiinayo, sidoo kalena Raj Arjun kama liito waa aabaha mayalka adag waxaana lagu tilmaami karaa cusbada Secret Superstar.
Gunaanad: Secret Superstar waa filim fariin dheeli tiran leh marna ku qiiro galinaayo marna ku farxad galinaayo fariintiisana si wacan loo diyaariyay waa hubaal in daawadayaasha gaar ahaan kuwa reer magaalka ah ee tiyaatarada Multiplex usoo daawasho tagaan ka heli doonaan.
Dhanka Boxoffice-ka Aamir Khan kasoo muuqashadiisa ayaa micno weyn sameyn doonto waxaana la wada rajeynaa markale Mr. Perfectionist filim uu gadaal ka riixayo inuu guul weyn gaari doono.
Taran Adarsh oo sheekada filimkaan falanqeeyay wuxuu qiimeyn ahaan siiyay 4-xidig (4/5) taasi oo ka dhigan in Secret Superstar fariintiisa heer sare tahay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Secret Superstar:
6 Responses to Sheekada Filimka Secret Superstar: Waa mid ka mid ah aflaanta ugu wanaagsan 2017
Amir khan Qof la tartami karto majirto waa nin aqli badan sidoo kalena yaqaan sida wax loo jilo Guul amir iyo jilaayaasha filimka
waa BLOUCBOUSTER filimkan sida aan hubo trailerkisa ayaa iqiira galiyaya runtii zaiara wasim way dadashay aqoonsi ficana way helaysaa hadii bollywoodkii aflaamtan oo kale samayn lahayeen ganacsi burburka ah way ka bixi lahaayeen
Asc zakariye welcome back
Waxan ku weydiinaya filimka mubarakn waxan arkay sanjay kapoor oo muuqaal marti kuleh hadaba 2dan walaalo anil kapoor & sanjay kapoor waligood filin kale maka soo wada muuqdeen mise mubarakan oo kaliya aya ugu horeeyay
Zakariye waxan codsanayaa barnaamijka weydii iyo jawaabta celinta filimside ee maal maha axada iyo khamiista waqtigaa jawaabta labixinaayo la dheereeyo si dhamaan dadka kasoo daaha ee iyagana su aashooda u soo gudbiyaan badanaa galbihi aanoo maqan aya lasoo dhigaan habeenkiina markaa imaado jwbihii ayaaba labixiyaa hala daahiyo jwbta THANKS
filimkaan markuu ugu yaraado superhit ama blockbuster wye
Zakariye Abdi Waan Ku Salamay Bro, Waxan Jeclaan Lahaa Inaad Noosoo Gudbisid Lacagaha Lagu Qarash gareyay Sida uu hit, super hit ama blockbuster Ku noqon karo Mhdsnd